YATHAZONE - NEWS and ENTERTAINMENT
မုန်တိုင်းနှစ်ခုနှင့် တရုတ်ပင်လယ် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကို ဖြတ်သန်းပြီး ဟိုင်နန်ကျွန်းအရှေ့ဘက် မြောက်လတ္တီကျု့ 21.30’N အရှေ့လောင်ကျီကျု့ 110.55’E တရုတ်ကမ်ရိုးတန်းကုန်းတွင်းကို ဝင်ရောက် လျက်ရှိသော တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းChabaသည် ယခု အချိန်အထိ အားကောင်းတိုက်ခတ်လျက် ရှိပါတယ်… အရှေ့တရုတ်ပင်လယ်မှာလည်း ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်လာတဲ့ မုန်တိုင်း Storm Aere (Domeng) ဟာ မြောက်လတ္တီကျု့ 26.6N အရှေ့လောင်ကျီကျု့ 128.56E အနီးအနားဝန်းကျင်မှာ တည်ရှိနေပြီး လေတိုက်နှုန်း 50mph လေထုဖိအား 994မီလီဘားဖြစ်ပြီး မြောက် အရှေ့မြောက်ဘက်ကို ရွေ့နိုင်ပါတယ်… ဒီမုန်တိုင်းတွေက မြန့်မာပင်လယ် မွန် တနင်္သာရီ ပင်လယ်ကို လှုပ်ခတ်စေတယ်… မွန် တနင်္သာရီပင်လယ်တွေမှာ လက်ရှိ အခြေအနေထက် ရက်ဆက်ပြီး ပိုပြီး …
အိမ်တိုင်းမှာ ရှောက်ပင်တပင်လည်း စိုက်ထားသင့်ပါတယ်…
အိမ်တိုင်းမှာ ရှောက်ပင်တပင်လည်း စိုက်ထားသင့်ပါတယ်… ရှောက်ရွက်အစွမ်း-အံ့မခမ်း မြန်မာလဆန်းရက်မှာ ရှောက်ရွက်ကို စားထားရင် အဲဒီ တစ်လလုံး လေမဖြတ်တော့ဘူးလို့ ရှေးရိုးစကား ရှိပါတယ်။ ရှောက်ရွက်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငြုပ်ကောင်းတို့နဲ့ ဟင်းခါးချက်ပြီး အမြဲတမ်း သောက်ပေးရင် လေငန်းရောဂါ ပျောက်ပါတယ်။ ဒါတင်ပဲလား? မဟုတ်ပါဘူး၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖြစ်များပြီး၊ အပျောက်နည်းတဲ့ ကင်ဆာရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်၊ ရှောက်ရွက်ဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ မကြီးထွားနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို ၃/၄ ကြိမ် စားသုံးပေးရုံနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရှောက်ရွက်-မှာ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်တဲ့ Astsiri အဆီဓာတ်တစ်မျိုး ပါဝင်ပြီး သူ့အနံ့က ဦးနှောက်ကို စိတ်ဖိစီးမှု လျှော့ချတဲ့ ဟော်မှုန်းတစ်မျိုးထုတ်လုပ်အောင် …
အပျိုကြီးတွေ အလိုရှိသော ယောက်ျား
အပျိုကြီးတွေ အလိုရှိသော ယောက်ျား ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ မိန်းမ ကင်းရှင်းသောသူ အလိုရှိသည်ဟု အပျိုကြီးတစ်ယောက် သတင်းစာထဲတွင် ကြော်ငြာ ထည့်သည်။ တစ်ကိုယ်လုံး အရက်နံ့ ထွက်နေပြီး လက်ထဲတွင် စီးကရက် ကိုင်ထားသော လူတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။ ”ဘာကိစ္စလဲ” လို့ အပျိုကြီးက မေးလိုက်တော့… ”သတင်းစာထဲမှာ ကြေညာထားတဲ့ ကိစ္စ” “ဪ… ရှင် အရက် မသောက်တတ်ဘူးလား” ”မိုးလင်း မိုးချုပ် တစ်နေကုန် သောက်တယ်” ”ဆေးလိပ်တော့ မသောက်ဘူးမလား” ”ဘယ်ကလာ.. သောက်တာမှ မီးခိုး ခေါင်းတိုင်လိုပဲ တနေ့ ငါးဘူးလောက် ကုန်တယ်” ”ဒါဖြင့် မိန်းမတော့ ကင်းရှင်းတယ် ဟုတ်” ”ပေါက်ပေါက် ရှာရှာ.. …
အလွယ်ကူဆုံး ကြို့ထိုးပျောက်စေတဲ့နည်း ဒီနည်းလေးကို သေသေချာချာ မှတ်ထား လိုက်ပေတော့
အလွယ်ကူဆုံး ကြို့ထိုးပျောက်စေတဲ့နည်း ဒီနည်းလေးကို သေသေချာချာ မှတ်ထား လိုက်ပေတော့ အလွယ်ကူဆုံး ကြို့ထိုးပျောက်စေတဲ့ နည်း ကြို့ထိုးတာဟာ လူတိုင်းသိတဲ့ အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ ရောဂါကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ထိုးတဲ့အခါ နေရထိုင်ရခက် ကသိ ကအောက် ဖြစ် ရ ပါတယ် ။ အစာတွေ ခပ်မြန်မြန်စားမိတာ ၊ အစပ်တွေလို ကိုယ်မစားနိုင်တဲ့ ဟာတွေကို စားမိတာ နဲ့ အခြားအကြောင်းအရာ တချို့ကြောင့် ကြိုးထိုးတာ ဖြစ်တတ် ပါတယ် ။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကုသကြ ပါတယ် ။ ရေများများ သောက်ခိုင်းတာ ၊ ထမင်းလုံး ဝါးခိုင်းတာ ၊ စိတ်ဆိုးအောင် …
အားအင်ကုန်ခမ်း အာရုံကြော အားနည်းခြင်း ပန်းသေခြင်း သွေးအားနည်းခြင်း အသားအရည်ပွခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်း သက်သာစေတဲ့ ဆေးနည်း
အားအင်ကုန်ခမ်း အာရုံကြော အားနည်းခြင်း ပန်းသေခြင်း သွေးအားနည်းခြင်း အသားအရည်ပွခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်း သက်သာစေတဲ့ ဆေးနည်း ” ကျား/မ စွယ်စုံရ ဖလံတောင်ဝှေးဥ အားဆေးကြီး” သားသမီးမရသော ကျား မ မိတ်ဆွေများ။ ဟော်မုန်းအားနည်းသူများ၊ အားနည်း ပိန်လှီသူများ သွေးအားနည်းသူများ အဖေါအရောင်ဝေဒနာရှင်များ အတွက်အလွယ်ကူဆုံး အကောင်းဆုံးတွေထဲက အကောင်းဆုံး ဆေးနည်းလေး တစ်ခု မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းတွေဟာ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြီးသား ဆေးနည်း မူမှန်တွေ ဖြစ်သည့်အတွက် မည်သူမဆို ဘေးကင်း စိတ်ချစွာ ဖေါ်စပ် သုံးဆောင်နိုင်ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ်မှာ ဆေးပညာထက် ဆေးနည်းကိုသာ အလွယ်တကူ ယူလိုသူများကြပါသည်။ ဆေးဆရာလုပ်သူတွေက မဟုတ်မမှန် တင်ပါက အများအတွက် ဘေးဖြစ်နိုင်သည့် …
Relationship တစ်ခုခိုင်မြဲချင်ရင် 1-အပြန်အလှန် ချစ်ပါ။ 2-မ လိမ် ပါ နဲ့ ။ 3-အဆက် အသွယ် ပြတ် တာ မျိုး မရှိ ပါစေ နဲ့ ။ 4-တစ်ခုခု နာကျင် ရ ရင် ခွင့်လ ွှတ်ပြီး မေ့ ပစ် ပါ ။ 5-ပြတ်မယ်/လမ်းခွဲ မယ်လို့ လုံးဝ မပြော ပါ နဲ့။ 6-ဖြစ်နိုင်ရင် မရွဲ့ပါနဲ့။ 7-တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြား”မာနနဲ့ အတ္တ”ကို မေ့ ထား ပါ ။ 8-ကိုယ်မှားတဲ့ အခါ တောင်းပန်ပါ/ သူမှားတာကို ခွင့်လွှတ်ပါ (ချစ်သူတွေပါ ရန်သူတွေမှ …
“ဆီးအောင့်၊ ဆီးနည်း၊ ဆီးတော်တော်နဲ့ မထွက်တာတွေအတွက် ဆေးနည်း” ဒီဆေးနည်းကို ကျေးဇူးတော်ရှင် မုံလယ် ဆရာတော်ကြီး တပည့် ကိုတိုးလေးမှ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့် မှတဆင့် ကျွန်တော်ထပ်ဆင့် သိရခြင်းပါ ခင်ဗျာ။ ငှက်ပျောသီး ဖီးကြမ်းတစ်လုံးကို အခွံပေါ်မှ အပေါက်ဖောက်ပါ။ ခွေးတောက်ရွက် (၇) ရွက် ပတ်ထုတ်ပြီး သုံးခွက်တစ်ခွက် တင်ပြုတ်ပါ။ အခွံခွာပြီးပြုတ်ပြီး ငှက်ပျောသီးစားပါ အရည်ကိုလည်း သောက်ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဆီးသွားပြီးသော်လည်း ထပ်သွားချင်နေတာ ဆီးတော်တော်နဲ့ မထွက်တာ၊ ဆီးအိမ်မှာ အောင့်နေတာ၊ ဆီးနည်းတာ စတာတွေသက်သာပြီး ကောင်းသွားလို့ အခုအဘအတွက် ပြုတ်ပေးရင်း မိတ်ဆွေတို့ တိုက်ဆိုင်သူများရှိရင်ပေါ့ ခင်ဗျာ။ အဘ ဦးဆန်းဝေကို နှာခေါင်းပိုက် ထည့်ထားရလို့ ပြုတ်ရည်ကိုပဲ …
ဖခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွတဲ့ ရင္ဖြင့္စကား
ဖခင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွတဲ့ ရင္ဖြင့္စကား အသက္ ၅၀ အ႐ြယ္ ဦးေလးႀကီးတစ္ေယာက္ေဆးခန္းတစ္ခု အတြင္းသို႔ ကတုံကယင္နဲ႔ ဝင္လာေလသည္။ ႏြမ္းစုတ္စုတ္ ပုဆိုး၊ တြန႔္ေက်ေနေသာအျဖဴေရာင္တထြန္ အက်ႌလက္ရွည္ကို ဝတ္ဆင္ထားသည္။ တုံယင္ေနေသာ လက္မ်ားျဖင့္ ေဆးခန္းဝ၌ ခ်ိတ္ထားေသာတုံကင္နံပါတ္တစ္ခုအား ယူၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ေဘးထိုင္ခုံတစ္ခု၌ ဝင္ထိုင္ေလသည္။ အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိေသာမ်က္လုံးမ်ားက ေရွ႕ကို ေငးစိုက္လွ်က္၊ တစ္ခါတစ္ခါကြၽန္ေတာ့္အား လွည့္ၾကည့္လွ်က္ ရွိေနသည္မွာ သူသည္ ကြၽန္ေတာ့္ကို စကားေျပာခ်င္ ေနသည့္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကပင္စၿပီး စကားစေျပာလိုက္သည္။ “ဦးေလး…ေဆးခန္း လာျပတာလား”ကြၽႏ္ုပ္သည္ ေဆးခန္းလာျပမွန္း သိသိႏွင့္ စကားအစ ရွာမရသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေမးလိုက္မိ၏။ ဦးေလးႀကီးမွာ ရီေဝေနေသာ မ်က္လုံးအစုံတို႔ျဖင့္ကြၽန္ေတာ့္အားၾကည့္ရင္း ေခါင္းညိမ့္ျပေလသည္။ “ကြၽန္ေတာ္က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ …
“အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်”… ဦးနှောက်ကို ဘောင်ခတ်ထားလို့တော့ မဖြစ်ဘူးနော်…
“အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်”… ဦးနှောက်ကို ဘောင်ခတ်ထားလို့တော့ မဖြစ်ဘူးနော်… ဂျပန်တွေက ကြက်မတကောင်ကို တနေ့ ၂ လုံး ဥအောင် လုပ်လိုက်ပြီ… အောင်မြင်တယ်။ တနေ့ ၂ လုံး ဥတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့… တနေ့တာ ၂၄ နာရီကို တနေ့ ၁၂ နာရီ လုပ်လိုက်တယ်။ဥကြက်မတွေကို ပြင်ပလောကနဲ့ ပေးမတွေ့ဘူး… အလုံ လုပ်ထားတယ်။ ၆ နာရီ အလင်းရောင် ပေးတယ်။ ၆ နာရီ အမှောင် ချထားလိုက်တယ်။ ကြက်မတွေက တနေ့ မိုးချုပ်ပြီထင်ပြီး ဥတလုံး ဥချလိုက်တယ်။ ပြန်ပြီး မိုးလင်း လာသယောင်ယောင်… ၆ နာရီ အလင်းရောင် ထပ်ပေးတယ်။ ပြီးရင် ပြန်အမှောင် …
ဘယ္လိုအခ်ိန္မွ လင္ႏွင့္ မယား အလိုလိုကြာရွင္းၿပီးသားျဖစ္သလဲ?
ဘယ္လိုအခ်ိန္မွ လင္ႏွင့္ မယား အလိုလိုကြာရွင္းၿပီးသားျဖစ္သလဲ? ”မယားကစြန႔္ပစ္ ၁ႏွစ္ လင္စြန႔္ပစ္ ၃ႏွစ္ ၾကာရင္” အလိုလို ကြာရွင္းၿပီးသားျဖစ္သြားၿပီေလ ”ဆိုေသာ အရပ္စကားအေပၚ အထင္အျမင္ရွင္းလင္းေစရန္… လင္မယားကြာရွင္းျခင္းဥပေဒ… လင္မယား အဆက္အသြယ္ အေထာက္အပံ့မရွိလဲ တရားဝင္မကြာရွင္းေသးသ၍ လင္မယားအရာ မပ်က္ယြင္းပါ။ လင္ျဖစ္သူ ေနအိမ္မွစြန႔္ခြာၿပီး ၃ ႏွစ္တိုင္ေအာင္ အဆက္အသြယ္-အေထာက္အပံ့ မရွိရင္ေသာ္၎ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ျပဳရင္ေသာ္၎ မယား၏ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ဆင္းရဲေစရန္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ႏွိပ္စက္ေနရင္ေသာ္၎ မယားအား လက္ေရာက္မႈ တစ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ယုံမွ်ျဖင့္၎ (မယားမွ တရား႐ုံးမွာ ကြာရွင္းခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္)။ က်ိဴးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ မယားသည္ ေနအိမ္မွစြန႔္ခြာကာ ၁ ႏွစ္တိုင္ အဆက္အသြယ္မလုပ္ / …
Total views : 729021